Zimbabwe Embassy in Paris | Embassies in Paris
Embassy of Zimbabwe in Paris
The Zimbabwean Embassy in France is a bilateral mission in Paris and promotes Zimbabwean interests in France. The embassy of Zimbabwe also plays an important role in development, cultural affairs and contacts with the local press of France. The Zimbabwean Embassy in Paris is headed by David Hamadziripi - Ambassador of Zimbabwe to France.
Zimbabwean Embassy in Paris, France - 10, rue Lord Byron - 75008 Paris - France
(+33) 1 56.88.16.00
(+33) 1 56.88.16.01
David Hamadziripi - Ambassador
Many embassies in France require an appointment before you visit. On the official website of the Zimbabwean embassy in Paris you will find information on opening hours and how to book appointments.
For all Zimbabwean visa related matters contact the embassy in Paris before you travel. Information is available on the embassy website (www.ambassade-zimbabwe.com) or contact the visa department by telephone (+33) 1 56.88.16.00 or email zimparisweb@wanadoo.fr
Consulates of Zimbabwe in France
Next to the embassy in Paris there could be additional Zimbabwean consulates located in France.
Please check below for the locations of the Zimbabwean consulates in France.
Zimbabwean Consulates in France
Next to the embassy in Paris, Zimbabwe has consulates in the following cities: (if there are no cities mentioned here that means that Zimbabwe does not have any consulates located in France ).
The consular department of the Zimbabwean Embassy in Paris offers consular assistance. The consular department in general offers services for visitors from France to Zimbabwe as wel as for Zimbabwean citizens in France. Generally, services comprise of visa applications, passport renewals, marriage registration, legalization of documents, birth of a child, Zimbabwean nationality issues and more. Contact the consular department directly by telephone or email.
www.123embassy.com - Please note that we are not the official website of the Zimbabwe Embassy in Paris - France. Furthermore, we also do not have any connection with the embassy visa department or any other consular sections.